Xalaalaynta Deeqaha iyo khayraadka lagu helo astaanta qaranimo waxaa xalaalayn kara nidaam sharciya oo lagu saleeyay cadaalad, Waa Qalinkii Naasir Aadan Siciid
Xalaalaynta deeqaha iyo khayraadka lagu helo astaanta qaranimo waxaa xalaalayn kara nidaam sharciya oo lagu saleeyay cadaalad,
Waxaa waajiba in dhamaan bulshada lagu dhaqo xeerarka iyo qawaaniinta lagu heshiiyay waa sida kaliya ee cadaalad iyo dawladnimo qurux badan loo heli karaayo.
Deeqaha waxbarasho waa rukni wayn oo ka qayb qaata horumarka iyo dhismaha bulsho, xukuumadda waxaa looga fadhiyaa inay siyaasad qaran iyo qorshe badhax tiran ka yeelato, guud ahaan bahda waxbarashada iyo deegaan kastaa ku qanci karo.
Dooda iyo cabashada ay qabaan dugsiyada gaarka loo leeyahay waxaa wanaagsan in aanay u arag caruurta iyo mulkiiyaashu inay xuquuqay leeyihiin laga duudsiyaayo, xaqbay u leeyihiin inay doorkooda ku lahaadaan manfaca iyo jaanisyada soo baxa, sababtoo ah waa ka qayb bulshada, siday ugu waajibtay cashuurtu ayay xaq ugu leeyihiin inay qaybtooda helaan.
Xeer dajinta iyo haayadaha kale ee ku shaqada leh waa inay dajiyaan siyaasad guud oo qaranku ka leeyahay arrimaha noocaasa, kala xadaynta iyo doorka muwaadin ama deegaan kastaa ku yeelanaayo khayraadka iyo deeqadaha kusoo baxa heer qaran.
Qalinkii Naasir Aadan Siciid